Burkina Faso oo wada hadal la furtey xarakada islaamiyiinta kasoo hor jeed, soomaali tusaale ma u qaadan kartaa. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Burkina Faso oo wada hadal la furtey xarakada islaamiyiinta kasoo hor jeed,...
Burkina Faso oo wada hadal la furtey xarakada islaamiyiinta kasoo hor jeed, soomaali tusaale ma u qaadan kartaa.
Dowladda Burkina Faso ayaa markii ugu horreysay Khamiistii sheegtay inay u furan tahay wadahadal lala galo mintidiinta islaamiyiinta ah si loo isku dayo in lagu soo afjaro kacdoonka sii kordhaya, iyadoo ka dhawaajisay mowqif ay qaateen maamulada dalka ay deriska yihiin ee Mali.
Ku dhowaad toban sano ka dib markii mintidiin lala xiriirinayo Al Qaacida ay si kooban ula wareegeen gacan ku haynta waqooyiga Mali, dawladaha ku yaal Galbeedka Afrika ee gobolka Sahel mar kale waxay isku arkaan inay la halgamayaan xakamaynta jihaadiyiinta, taasoo keentay in qaar ka mid ahi ay dib u eegaan diidmada hore ee wadahadallada.
“Haddii aan dooneyno in aan soo afjarinno dhibaatada amni, waxaan u baahanahay in aan raadino wadooyin iyo qaabab aan kula hadalno kuwa mas’uulka ka ah weerarada argagixiso si aan nabad u helno,” ayuu yiri raiisul wasaare Christophe Dabire oo ka jawaabayay su’aal baarlamaanka la weydiiyay.
Weerarada ka dhacay Burkina Faso ee ay geysteen dagaalyahano lala xiriirinayo Al Qaacida iyo dowladda Islaamiga ah ayaa ka soo kordhay Burkina Faso tan iyo 2018, taasoo gacan ka geysaneysa dhibaato bini’aadanimo oo ku qasabtay in ka badan hal milyan oo qof inay ka qaxaan guryahooda.
Madaxweynihii hore ee dalka Maali Ibrahim Boubacar Keita ayaa sheegay sanad ka hor in dowladiisa ay diyaar u tahay in ay la xaajooto ururka maxaliga ah ee ka tirsan al-Qaacida, dowlada hada jirtaana waxay xaqiijisay mowqifkaas.
Ma cadda in wax horumar ah la sameeyay tan iyo markaas. Garabka Al Qaacida ayaa sheegay inay ka qeyb gali doonaan oo kaliya wadahadalada nabada hadii dowlada Mali ay ceyriso ciidamada Faransiiska iyo kuwa Qaramada Midoobay.
Dowladii hore ee gumeysiga faransiiska oo in ka badan 5,000 oo askari ka joogaan gobolka saxel si ay ula dagaalamaan kooxaha xagjirka ah ayaa sheegtay inay ka soo horjeedaan wadahadal lala galo mujaahidiinta
Previous articleHorjooge Al-Shabaab u qaabilsanaa qaraxyada oo lagu qabtay Gobolka Gaalgaduud
Next articleCIRRADA TIMAHA: Waxyaabaha Sababa Iyo Sida Looga Hortagi Karo!
Joe Biden oo qorsheynaya in siyaasad cusub lagu wajaho arimaha Yemen